ZNCC inoti iri kuda kuti hurumende itaure nevemabhanga emunyika kuitira kuti vadzikise mari iyi.
Mutungamiri weZNCC, VaDavid Norupiri, vanotiwo mabhizmisi ari kukwanisa kushanda achingosvika pazvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana nepamusana pezvimhingamupinyi zvakawanda zvavari kusangano nazvo.
Vatiwo ZNCC yaumba bazi rinenge richishanda nevemabhizimisi makuru nemadiki vachivakurudzira kuti vakweretewo mari kumabhanga kuti mari dzavo dzipinde mumabhanga.
Vakawanda vemabhizimisi ava vanonzi havaendese mari dzavo kumabhanga uye havabhadhare mitero zvoita kuti mari iri kutenderera mumabhizimisi iderere.
Sangano iri rasangana neChipiri nechikwata che International Monetary Fund chiri munyika richikurudzirawo IMF kuti idyidzane neZimbabwe.
Hurukuro naVaDavid Norupiri